‘केही’ को कुरो | अमेत्य
यसरी ‘केही’ मा केही खोजिरहँदा यो ‘म’ पात्रलाई पक्कै केही भएको छ भनी सोच्नु हुँदो हो ? केही त पक्कै भएको छ । मैले यो ‘केही’ महसुस गर्न थालेको भर्खरै हो । त्यो ‘केही’ के हो ? थाहा भएन । कहिले काँही डर लाग्छ, कँही यो ‘केही’ ले केही नै नभएको शुन्यमा त पुर्‍याउने हैन ?
‘कुरो मात्र गरेर भएन । केही(काम) गर्नुपर्‍यो ।’
‘केही(माया?) भएकै हुनुपर्छ । छाम त मुटु’
‘केटो गतिलो छ, केही(खास) बात छ केटोमा’
यसरी ‘केही’ केही नै नबोलिकन केही भनिरहेका छन्, मात्र सक्नुपर्‍यो सुन्न, बुझ्न र मनन गर्न । केही न केही त अवश्य छ हरेकभित्र, तर त्यसलाई खनेर निकाल्न केही न केही त अवश्यै चाहिएला-परिश्रम, अथक प्रयास, धैर्यता आदि आदि, हैन र ? तर सपना मात्र बुन्ने दिमाग र अल्छे शरीरले कहाँ गरी खान दिदाँ रहेछन् र,
यिनिहरु चिच्याउँदै छन्-’यहाँ २ दिनमै ‘केही’ खन्नुपर्‍यो, कोही मजदुर छ कि छैन, हँ ?’